ပြည်တွင်းတွင် ရာင်းချရန် ဟွန်ဒါကလစ်များ | ဟွန်ဒါကလစ် မ်ာတော်ဆိုင်ကယ်ဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Blue ရောင် Honda Click PGM-Fi 125i အမျိုးအစား 2014 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 125 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်...
White ရောင် Honda Click PGM-Fi အမျိုးအစား 2015 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 150 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . န...
White ရောင် Honda Click PGM-Fi 125i အမျိုးအစား 2015 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 125 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ...
Lks 21 ညှိနှိုင်း
Black ရောင် Honda Click 125i အမျိုးအစား 2015 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 125 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . နည်...
Honda Click 125i 2013 (16.5Lks)
Black ရောင် Honda Click 125i အမျိုးအစား 2013 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 125 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . နည်...
Blue ရောင် Honda Click 125i အမျိုးအစား 2011 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 110 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . နည်း...
Honda Click 125i 2015 (22.3Lks)
Red ရောင် Honda Click 125i အမျိုးအစား 2015 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 125 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . နည်းပ...
Lks 17 ညှိနှိုင်း
Purple ရောင် Honda Click 125i အမျိုးအစား 2013 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 125 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . နည...
Red ရောင် Honda Click 125i အမျိုးအစား 2013 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 125 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . နည်းပ...
Honda Click 125i 2014 (19.3Lks)
Light blue ရောင် Honda Click 125i အမျိုးအစား 2014 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 125 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ...
White ရောင် Honda Click 125i အမျိုးအစား 2013 ခုနှစ်ထုတ်, ဆိုင်ကယ်သည် Automatic ဂီယာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 125 အင်ဂျင်ပါဝါတပ်ဆင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနှင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် . နည်...
ဟွန်ဒါ ဆိုင်ကယ် များ
ဟွန်ဒါ ဆိုင်ကယ် များဟာ မန်မာပြည်မှာ အရေအတွက် အများဆုံး ဆိုင်ကယ် စာရင်းထဲမှာ ပါဝင် ပါတယ်။ ဟွန်ဒါ က ဂျပန် အမှတ်တံဆိပ် ဖစ်ပေမယ့် ထုတ်တာ ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံက ထုတ်လုပ်တာ ဖစ်ပါတယ်။ ဟွန်ဒါ ရဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အခြေဆိုက်တဲ့ စက်ရုံ ကနေ ထုတ်လုပ်ခြင်း ဖစ်ပါတယ်။ ပီးတော့ မန်မာပြည် ဈးကွက် ကို ဝင်ရောက် ပါတယ်။ ဟွန်ဒါ ကနေ ကား ကော ဆိုင်ကယ် ကာ ဝင်ရောက်နေခြင်း ဖစ်ပါတယ်။ နယ်စပ်က န ဝင်ရောက်မှု အများဆုံး ဖစ်ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်က လာတဲ့ ဆိုင်ကယ် များစွာ ရှိပေမယ့် ကြိုက်ကြ၊ အဝယ်များ ကြတာ ကတော့ ဟွန်ဒါပဲ ဖစ်ပါတယ်။ အသစ် လည်း ဝယ်ကြ သလို တစ်ပတ်ရစ် လည်း ဝယ်ကြ ပါတယ်။
ဟွန်ဒါ လူသိများ ဆိုင်ကယ် နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်
ဟွန်ဒါ ဆိုင်ကယ်မှာ လူသိ အများဆုံး အဝယ် အများဆုံးက ဝမ်းတန်းလို့ အလွယ်ခေါ်တဲ့ 110 မ်ာဒယ် ဖစ်ပါတယ်။ သူက ၂ ယာက်စီး ဆိုင်ကယ် ဖစ်ပြီး ခရီးတို၊ ခရီးရှည် မာင်းလို့ ရပါတယ်။ အင်ဂျင် အရွယ် ရာဂဏန်းသာ ရှိပြီး ဆီ သိုလှောင် ထည့်နိုင်စွမ်းက ၃.၇ လီတာ ဝန်းကျင်က အများစု ဖစ်ပါတယ်။ ဂီယာ ၄ ချက် အမျိုး အစား ဖစ်ပြီး အ်ာတိုဂီယာ အသုံးပြုတဲ့ ဆိုင်ကယ် များလည်း ရှိပါတယ်။ အ်ာတို ဂီယာ ကတော့ ဈးပိုကြီး ပါလိမ့်မယ်။ ဟွန်ဒါက အင်ဂျင် ကာင်းပြီး အသုံးပြုတဲ့ ဆီ ကတော့ ဓာတ်ဆီ ဖစ်ပါတယ်။ နယ်စပ် ဒသ တွမှာတင် မကပဲ မန်မာ ပည် တစ်ဝန်း ကနေ မှာယူ စီးကြ ပါတယ်။ ဈးနှုန်း အားဖြင့် ၁၀ သိန်း အထက် မှာ ရှိပြီး အသစ်တွေ ဖစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ရစ် စီးမယ် ဆိုရင်တော့ ၅ သိန်း လာက်နဲ့လည်း ရပါတယ်။ မ်ာဒယ် အနေနဲ့ ကလည်း နာက်ဆုံးပေါ် မ်ာဒယ်တွေ ရနိုင်မှာ ဖစ်ပါတယ်။
နောက် တစ်မျိုး ကတော့ Super Cub (စူပါကပ်) ဆိုင်ကယ် ဖစ်ပါတယ်။ သူက ပိုသေးတဲ့ ဆိုင်ကယ် ဖစ်ပါတယ်။ အိမ်စီး အတွက် အပြင် လုပ်ငန်း သုံးလည်း အသုံးပြု ကြတဲ့ ဆိုင်ကယ် ဖစ်ပါတယ်။ ဈးလည်း ပိုသက်သာ ပါတယ်။ ဟွန်ဒါ ကနေ ဝန်းတန်း နဲ့ စူပါကပ် အပြင် အခြားသော ဆိုင်ကယ် အမျိုး အစား တွ လည်း အများကြီး ဝင်ပါ သးတယ်။ လူငယ် ကြိုက် ပိုင်ဆိုင်ကယ် ဆန်ဆန် များလည်း ထုတ်လုပ် ပီး ဝင်ရောက် ပါသေး တယ်။
ဟွန်ဒါ ဆိုင်ကယ်တွေမှာ အမျိုးအစားအားဖြင့်တော်တော်များများ ရွးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုယ်ကယ်ဒူးဖုံး၊ ဒူးကာ အရောင်အသွေးမျိုးမျိုး အာက်ဖက် ခြနင်းအပြားတပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ ဆိုင်ကယ်တွေကိုလည်း တွ့နိုင်ပါတယ်။ ဟွန်ဒါက ထုတ်တဲ့ ဆိုင်ကယ်ဘီးတွေဟာ အမျိုးအစားစုံလင်သလို အင်ဂျင်ပါဝါလည်း အမျိုးမျိုးကွာပါတယ်။ စကူးတာ ဘီးလေးတွေဖြစ်တဲ့ ဘီတ်လို့ ခ်ါတဲ့ ဆိုင်ကယ်လေးတွေက အင်ဂျင် ၅၀ စီစီကနေ စပြီး ဌင်းရဲ့ ဘရန်ထဲမှာ အငယ်ဆုံး အင်ဂျင်ပါဝါ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အကြီးဆုံး အင်ဂျင်ပါဝါကတော့ ၁၈၃၂ စီစီမှာ ရှိပါတယ်။ ဌင်းကတော့ လူ နှစ်ယောက်စီး ဆိုင်ကယ်ကြီးမျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟွန်ဒါက အင်ဂျင် ကာင်းပြီး အသုံးပြုတဲ့ ဆီ ကတော့ ဓာတ်ဆီ ဖစ်ပါတယ်။ နယ်စပ် ဒသ တွမှာတင် မကပဲ မန်မာ ပည် တစ်ဝန်း ကနေ မှာယူ စီးကြ ပါတယ်။ ဈးနှုန်း အားဖြင့် ၁၀ သိန်း အထက် မှာ ရှိပြီး အသစ်တွေ ဖစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ရစ် စီးမယ် ဆိုရင်တော့ ၅ သိန်း လာက်နဲ့လည်း ရပါတယ်။ မ်ာဒယ် အနေနဲ့ ကလည်း နာက်ဆုံးပေါ် မ်ာဒယ်တွေ ရနိုင်မှာ ဖစ်ပါတယ်။
ဟွန်ဒါ ကလစ် ဆိုင်ကယ်ဘီးတွေကို အရောင်အသွေး အမျိုးမျိုးမှာ တွ့နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး Electro starter တွပါ ပါဝင်ပြီး အင်ဂျင်အားဖြင့် ၁၂၅ စီစီရှိတဲ့ အင်ဂျင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မ်ာဒယ် အသစ်တွေကို ၇ရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ဟွန်ဒါ အသစ် နဲ့ အဟောင်း ဈးကွက် က မျှမျှ တတ ရှိနေ ပါတယ်။ အသစ် များ လည်း ဝယ်ကြ သလို အဟောင်း ကိုလည်း အပြန်အလှန် ဝယ်စီး နတာ ရှိပါ သးတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ ကနေ တင်သွင်းခြင်း ဖစ်ပြီး ကုန်းလမ်း ကနေ ဝင်ရောက်မှု အများဆုံး ဖစ်ပါတယ်။ အးဂျင့် များကနေ ဝယ်တာ ရှိသလို၊ အရောင်း စင်တာ တွကနေ လည်း ဝင်ကြ ပါသေး တယ်။